Xiddiga labaad ee ugu gambiska badan horyaalka La Liga xilli ciyaareed oo la ogaaday kaddib Lionel Messi – Gool FM
(Spain) 17 Feb 2020. Celta Vigo ayaa taako u dhigtay kooxda Real Madrid oo ay xalay marti ugu noqotay garoonka Bernabeu, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Xiddiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Eden Hazard ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay ciyaartii ay xalay la ciyaareen naadiga Celta Vigo.
Inkastoo uu ahaa kulankiisii ugu horreeyay kaddib markii uu ka soo laabtay dhaawac uu ku maqnaa ku dhawaad ​​mudo 3 bilood ah, haddana Eden Hazard ayaa ahaa xiddigii ugu firfircoonaa kooxdiisa intii uu garoonka ku jiray.
Inkastoo Real Madrid aysan soo bandhigin xalay qaab ciyaareed heer sarre ah inta ay ciyaarta socotay, haddana qaab ciyaareedka uu sameeyay Hazard ayaa loo tixgalin karaa inuu ahaa kan kaliya ee ugu fiicnaa kooxdiisa kahor ciyaarta Manchester City ee tartanka Champions League.
Haa… ma uusan dhalinin wax gool ah kulankii xalay, balse wuxuu sabab u noqday rigooradii uu dhaliyay kabtanka kooxda Rea Madrid ee Sergio Ramos, mana aanan dareemin inuu u baahan yahay waqti, si uu dib ugu soo ceshado awoodiisa jir ahaaneed kaddib dhaawacii uu ka soo laabtay.
Si kastaba ha noqotee, Eden Hazard ma uusan gaarin heerkiisii ugu sarreeyay ee kooxda Real Madrid, gaar ahaan marka ay tahay in la go’aamiyo kulamada, balse wuxuu muujiyay qaar ka mid ah awoodiisa shaqsiyeed ee ah inuu si wanaagsan u gambiyo iyo kubad heysashada.
Haddaba rikoorada ayaa waxay muujinayaan in Eden Hazard uu yahay laacibka labaad ee ugu gambiska fiican horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi xilli ciyaareedkan.
Shaki kuma jiro in Lionel Messi loo arko inuu yahay xiddiga ugu gabiska fiican adduunka, kaliya maahan horyaalka La Liga ee dalka Spain, inkastoo xilli ciyaareedkan uusan sameynin bandhig shaqsiyadeed ee aad u fiican, hadana wuxuu ku guuleystey inuu sameeyo 150 gambis oo wad guuleystay horyaalka ilaa iyo haatan.
Eden Hazard ayaa wuxuu sameeyay 37 gambis ee wada guuleystay, laakiin waa inaan tixgelinno inuu ciyaaray kaliya 618 daqiiqo oo horyaalka La Liga ah, halka Lionel Messi uu ciyaaray 1619 daqiiqo si uu u gaaro rikoorkan.